Myanmar Defence Weapons: Cambodian BM-21 122mm MLRS
Posted by MM at 1:55 PM
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ April 24, 2011 at 10:58 AM
(ဘလော့ရှင်ရေ ကိုMMရေ.. အခုဆောင်းပါးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက် ကော်မန့်ကို ဖျက်လိုက ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော် နားလည်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို လူမျိုးရေးမုန်းတီးအောင် လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထပ်ပြီး ပြောလိုပါတယ်။ သူတို့ကို လူမျိုးရေးအရ စော်ကားလာရင် သူတို့ဘက်ကနေ ကျနော် ကာကွယ်ပေးမှာပါ။ အခုဟာ ပြောသင့်တယ်ထင်လို့ပြောနေတာပါ)
‘ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့် အတွေးအမြင်များ’ အမည်ရှိ စာအုပ်ထုတ်ဝေတယ် ဆိုလို့သွား ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ထုံးဆန်အတိုင်းပဲ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်. . . ဒါ့ကြောင့် ဟိုအခွင့်အရေး ရသင့်တယ်။ ဒီအခွင့်အရေးရမှ ဖြစ်မယ်။ ဒီလောက်အခွင့်အရေးရမှ ပြည်ထောင်စုက စစ်မှန်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ယောကျားတွေဖြစ်ပါလျက်နဲ့ . . . ဘာလို့ အခွင့်အရေးတွေပဲ ထိုင်ပြီးတောင်းနေကြတာလဲ? လူ့ဘ၀ဆိုတာ အခွင့်အရေးပဲ ထိုင်တောင်းရမယ်လို့ မင်းတို့ရဲ့ မိဘတွေက သင်ပေးထာတယ် ထင်ပါ့။ အမိနိုင်ငံကို ချစ်ရကောင်းမှန်း … . . အမိနိုင်ငံအပေါ်မှာ တာဝန်ကျေရမှန်း . . . မင်းတို့တွေက မသိကြဘူးနော်။ ဒီမယ် အခွင့်အရေးကို လိုချင်ရင် မိမိတာဝန်ကိုသိရမယ်.. ထိုတာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ဖို့လဲ ကြိုးစားရမယ်ကွ။ မင်းတို့တွေ အခွင့်အရေးပဲတောင်းနေတာကို ခဏရပ်ပြီးတော့
☀ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ရခိုင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးကို တခါလောက် ပြောကြစမ်းပါ။
☀ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ရှမ်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးကို တခါလောက် ပြောကြစမ်းပါ။
☀ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ကရင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးကို တခါလောက် ပြောကြစမ်းပါ။
☀ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ကချင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးကို တခါလောက် ပြောကြစမ်းပါ။
☀ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ မွန်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးကို တခါလောက် ပြောကြစမ်းပါ။
☀ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ကယားတွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးကို တခါလောက် ပြောကြစမ်းပါ။
☀ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ချင်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးကို တခါလောက် ပြောကြစမ်းပါ။
mg April 24, 2011 at 3:23 PM
ဟုတ်တယ်ဗျာ တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ လူမျိုးစွဲအစွန်းရောက်နေတဲ့သူတွေများတယ်။အထူးသဖြင့်ပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ။သူတို့က ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ့်ဒေ ကိုယ့်လူမျိုးလောက်ပဲ ပြောဆိုဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားတာ။နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက် ပြောမယ်ဆိုမယ် လုပ်မယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ပြီးရင်ပြောအုံးမယ်။ မင်းတို့ဗမာတွေအုပ်ချုပ်တာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ လာအုံးမယ်။ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအတိုင်း ကြိုးစားမယ်လည်းမ၇ှိပြန်ဘူး။တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်မှာလဲ။
နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက် လုပ်ဖို့ဆိုတာထက် ငါတို့နိုင်ငံအတွက်ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းပြောဖို့တောင် ၀န်လေးနေတဲ့သူတွေဗျ။ငါတို့နိုင်ငံတိုးတတ်ဖို့ ငါတို့ဘယ်လိုကြိုးစားမယ်ဆိုတာ မရှိဘူး ငါတို့ပြည်နယ် ငါတို့လူမျိုးစုအတွက် အခွင့်ရေး ဒါတွေပဲပြောနေ လုပ်နေတာ သိပ်ခတ်တယ် ဒီလူတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေကျတော့။
ကျားလေး September 15, 2011 at 1:12 AM
ကျွန်တော်က တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုး
တွေက ( ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းသလိုပဲ) မျက်ကန်းမျိုးချစ်
လို့ ခေါ်ရမဲ့လူတွေများတယ်ဗျာ့။ ကျွန်တော်သွားပြောလည်း
ဗမာကျွန်လို့ ကင်မွန်း အတက်ခံရတာကလွဲပီး ဘာမှာ့ရှိမှာမဟုတ်
ဖူး။ နိူင်ငံခြား သတင်းဌာနတွေကိုလည်း ကျွန်တော်သိပ် အသဲ
ပေါက်တယ်။ မြန်မာအစိုးရ မြန်မာစစ်တပ် မြန်မာ့ဝန်ထမ်း တွေ
ကုန်လုံး သမတကနေ ရုံးအကူ၊ စစ်သားအထိ သူတို့မကောင်း
တချို့လူတွေက သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကို အဟုတ်ထင်ကြ
sanaythar January 22, 2012 at 10:15 PM
ကျွန်တော် ဗမာစစ်စစ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ၊ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ၊ လမ်းခရီးမှာ၊
သင်္ဘောပေါ်မှာ၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရှမ်းမို့လို့၊ ရခိုင်မို့လို့။ ကရင်မို့လို့ ဆိုပြီးခွဲခြားခဲ့တာမျိုး ကျွန်တော်အသက် (၃၅)အထိမကြုံတွေ့ရဘူးပါ။ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းကလည်း ရှမ်းဆိုရင်၊ ရှမ်းကလေး၊ ဟေ့ကောင်ရှမ်းကြီး၊ မွန်ဆိုရင်လည်း၊ မွန်ကြီး စသည်ဖြင့် တန်းတူချစ်ကြ၊ ခင်ကြတာပါပဲ။ ခွဲခြားတာမျိုးမရှိပါ။ သို့သော်မိမိလူမျိုး၏ စာပေများ၊ ဂီတများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများပပျောက်မသွားအောင် မိမိတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်က အရင်ကြိုးစားရမယ်၊ ပျံ့နှံအောင်မြှင့်တင်ရပါမယ်။ ဗမာတွေကိုချည်းအပြစ်ပြောနေလို့ မရနိုင်ပါလို့မြင်ပါတယ်။ အားကြီးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုက အစဉ်အလာရှိပေမဲ့ အားနည်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဖုံးသွားတတ်တာ အပြစ်ပြောစရာမဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်က ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ဒီဘလော့လေးကို နေ့တိုင်းတက်ထားပါတယ်။ ညီအကိုအားလုံးကို လေးစားချစ်ခင်လျှက် Sanaythar
MM January 22, 2012 at 10:52 PM
ဟုတ်တယ်ကို Sanaytharရေ... (အားကြီးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုက အစဉ်အလာရှိပေမဲ့ အားနည်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဖုံးသွားတတ်တာ အပြစ်ပြောစရာမဟုတ်ပါ။) ဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်.. ဘာကြောင့်ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်က ထိန်သိမ်းထားရင် ဒို့အနေနှင့် သွားဖျက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလေ...။ အဲလိုဖျက်တယ်ဆိုတာလည်း မကြားဘူးပါဘူးဗျာ..။ အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲခင်ဗျာ နောက်လည်းအားပေးပါဦးဗျာ ဆွေးနွေးမှုတိုင်းကို လေးစားလျှက်ပါ...။